DHIRTA APPLE EE BISAYLKIISA DAMBE: SIFOOYINKA, FAA'IIDOOYINKA, FAA'IIDO DARRADA - NOOCYO TUFAAX AH
Ugu Weyn Ee Noocyo tufaax ah
Noocyo tufaax ah oo la gooyey
Waxaa la ogyahay in midhaha geedaha tufaaxu ay u bislaadaan waqtiyo kala duwan, laga bilaabo dhammaadka Agoosto ilaa bartamaha bisha Oktoobar. Isla mar ahaantaana, farqiga u dhaxeeya miraha waxay muujinayaan labadaba dhadhankiisa iyo mudada noloshooda.
Maanta, waxaan si faahfaahsan u fiirin doonaa noocyada dambe ee geedaha tufaaxa iyo sifooyinka daryeelkooda, tan iyo miro ay leeyihiin muddada kaydinta ugu dheer.
Noocyo tufaax ah - miraha, geedaha iyo faa'iidooyinka ugu weyn
Muujinta noocyo dambe ayaa ah in miraha ay u bislaadaan kaliya ka dib markii laga saaro geedkii iyo muddo cayiman oo been ah. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u eegto gobolka tufaaxa iyo si fiican u jiheysan marka ay lagama maarmaan tahay in laga saaro noocyada kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee Tufaaxyada ayaa la keydinayaa qaar ka mid ah noocyada ilaa bisha juun sanadka soo socda. Noocyada Hore waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin noocyo, qaan gaadhka ah ee miraha taas oo dhacda kaliya dhamaadka September ("Antonovka Dessert", "Nabadda").
Marka la gaaro bisha Oktoobar iyo ilaa bartamaha, wakhtigu wuxuu yimaadaa jiilaalka iyo noocyada dambe ee jiilaalka in la gooyo (Vityaz, Xusuusta Michurin, iyo Arday).
Apple kala duwan "Vityaz": sharaxaad
Kala duwanaantu waxay leedahay jiilaalka dabayaaqadii-jiilaalka, maaddaama caanaha miraha laga saari karo midhihiisa ay dhacaan oo kaliya horraantii bisha Oktoobar. Noocyo aad u badan. Waxaa laga helay iskutallaabta taranta geedo tufaax ah "Pepin Saffron" iyo "Anis Striped".
Miraha Kala duwanaantu waa mid aad u weyn - miisaankeedu yahay 140 garaam. Foomka, ma aha mid-hal dhinac, conical, mararka qaarkood waxaa jira miraha wareega-konik. Midabka midabka aasaasiga ah ee tufaaxa waa kareem, waxaa lagu daboolaa dusha sare ee muraayada casaan mugdiga ah ee dusha sare. Maqaarka midhihiisa waa siman yahay.
Noocyada Apple "Vityaz" waxaa lagu kala duwan yahay dhadhanka gaarka ah, taas oo lagu arkay xitaa Juun kaliya miro dhalatay.
Geed xoog leh oo koray oo ka soo jeeda dadka kale waxay noqon kartaa mid xooggan, oo ah geedkii kobcaya. Geedka wuxuu leeyahay tiro badan oo aad u weyn oo awood leh, taas oo adkeyn kara xitaa dalagyada ugu ballaaran.
Crohn shirokoraskidistaya, cufnaanta. Sida a Geedku way adag tahay in lagu koro beeraha qoyskaSi kastaba ha ahaatee, khabiiro waxay ku talinayaan in ay ku beeraan rootstocks hooseeya, taas oo u oggolaan doonta inay hesho dalag isku mid ah, laakiin geed ka baxsan oo sax ah.
Maqaarada ugu weyn ee noocyada kala duwan waa miraha.
Marka hore mid ka mid ah geed waxaad ka heli kartaa ilaa 240 kiilo dhadhan fiican oo casiir leh tufaaxa.
Marka labaad - waa cabbirka weyn ee midhaha iyo tayada dhadhanka fiican.
Seddexaad miraha waa la keydiyaa ficil ahaan illaa May. Sidoo kale, tufaaxu waxay leeyihiin bandhig sarreysa waxayna ku habboon yihiin isticmaalka tooska ah ee qaabka sirta iyo noocyada kala duwan ee farsamada.
Kala duwan ma u dulqaadan heerkulka hooseeya waxayna u baahan tahay fiiro gaar ah xilliga jiilaalka. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa in ay saameeyaan qolofka haddii aan la buufin muddada ubax.
Apple kala duwan "Rossiyanka"
Kala duwanaantani waa mid aan caadi aheyn degaanka Ruushka, inkastoo ay ka fog tahay waalidkeeda si fiican u yaqaan tayada iyo nolosha khudradda miraha. Gaar ahaan, "Rossiyanka" waa natiijada noocyada taranta "Antonovka Ordinary" iyo "Babushkino". Miraha ee noocaas ah soo ururi bartamaha bisha Sebtembar (noocyo kala duwan oo jiilaalka ah), waxaana lagu kaydin karaa ilaa May.
Miraha "Ruushka" waa kuwo aad u weyn, celceliska samee ilaa 200 garaam. Wareega, oo la mid ah qaabka miraha kubadda, waxay leeyihiin midab huruud ah oo ah midabka weyn. Dhinaca qorraxda, waxaa laga yaabaa in muuqaalka "foorjar" laga dareemo casaan. Midabka qashirku sidoo kale waa huruud, laakiin dhadhamin waa macaan iyo dhanaan. Tasters waxay u mahadcelisay dhadhan fiican.
Waxaa muhiim ah in la ogaado heerka sare ee ascorbic acid ee miraha kuwan - 100 garaam oo dhoobo leh ilaa 40 mg oo fitamiin ah. Qadarka fitamiin P ee 100 garaam oo miro ah waa 230 mg. Sidaa daraadeed, tufaaxa waxaa loo tixgeliyaa daaweyn waxaana lagula talinayaa in la cuno hypertensives.
Geed fasalka dheer. Qaababka taajka waa la isugu dhejiyaa, laamo badan oo faafa. Dhibaatooyinka ka saarista miro waa la dabooli karaa khafiifinta joogtada ah ee taajka.
Miraha waa la keydiyaa ilaa bilowga Maajo. Wax-soo-saarku waa mid aad u sarreeya oo sanadle ah, taas oo aan lagu arag Antonovka, oo ah deeq bixiyaha Ruushka. Damaashaad Cadaadiska sare ee cudurada fangas iyo heerkulka hooseeya.
Geedka dheer wuxuu u baahan yahay daryeel badan wuxuuna xoojiyaa goosashada tufaaxa bislaaday. Kala duwan ayaa jecel ciidda bacrin ah. Fruiting wuxuu ka bilaabmaa 5-6 sano kadib markaad beerto.
Apple kala duwan "Northern Sinap"
Kala duwan ee caanaha ayaa muddo dheer laga ogaa gobollada koonfurta ee Ukraine, gaar ahaan Crimea, sida jiilaalka dambe. Si kastaba ha noqotee, Northern Sinap ayaa loo qoondeeyay xitaa gobollada bari iyo waqooyiga ee Ruushka. Macaamiisha waxaa la helaa wakhtiga kaydinta dheer ee miro. Waxyaabaha kala duwan ayaa laga soocay tufaaxa Kindal-Kitayka iyada oo loo marayo pollinada bilaashka ah.
Miraha ma weyn qiyaastii 120 garaam. Foomka, waxay inta badan ku wareegsan yihiin, laakiin sidoo kale waxay ku jiraan koobab. Maqaarka saafiga ah ee miro ka dib marka uu jiifsado wuxuu noqonayaa mid saliid leh, dhibco dhalaalaya oo cad oo iftiimaya ayaa la arki karaa. Midabka tufaaxu waa mid huruud ah-cagaaran oo leh cawlaan-casaan.
Jirka wuxuu noqon karaa mid cad ama mid yar oo cagaaran (gaar ahaan inta lagu jiro xilliga qaadista). Qaab dhismeedka cufnaanta caanaha leh, cufnaanta dhexdhexaadka ah. Miraha waa mid aad u casiir leh, dhadhanka waa macaan iyo dhanaan, aad u fiican qaboojiyaha leh caraf udgoon fudud. Qadarka ascorbic acid ee 100 garaam oo miro ah waa 11.5 mg.
Geedku waa mid adag oo aad u ballaaran. Crohn waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah, oo leh laamo waaweyn oo qalfoof ah, kuwaas oo tiro badan oo ka mid ah laanta khudradda khudradda ka baxda ay ka baxaan. Qaabka taajka waa ballaaran-giraan ah.
Jiilaal-adag. Ciriiri badan oo ka mid ah miraha aad u dhadhan fiican leh. Tufaaxa waxaa loo isticmaalaa labadaba ceydhin iyo ka dib marka la sameeyo qaabka casiirka ah, wax lagu kariyo, saxaraha ama khudradda la qalajiyey. Miraha qarsoodi ilaa May.
Waxaad u baahan tahay inaad noqoto feejignaan aad u badan oo aan ka maqnayn wakhtiga saxda ah si aad midhaha uga saarto geed. Gaar ahaan, haddii aan la qabsan by Bisaylkiisa, waxay, marka hore, ma yeelan doonaan tayada dhadhan rabitaanka, iyo marka labaad, waxay qaban karaan dabka oo aan la kaydin doonaa. Midhaha aan-hal-cabbir iyo dalagyo badan ayaa lumiya bandhiggooda. Cadaadiska abaaraha iyo cudurrada fangasta ee noocyada kala duwan.
Tacliinta Fasalka "Arday"
Kala duwan kala duwan ee jiilaalka dambe ee tufaax, helay natiijada ah ee xulashada of Welsey iyo Bessemyanka noocyo Michurinskaya. Fasalka ugu caansan "Arday" ee ku yaala Gobolka Central Black Soil ee Russia.
Cabbirada miraha ma aad u weyn, laakiin waa weyn oo ku filan inay soo bandhigaan soo jiidasho. Qaabkoodu waa hal dhinac, wareegsan, isla'eg. Maqaarku waa mid culus laakiin siman, oo leh dalool yar oo hareeraha hareeraha ah. Midabka miro waa cagaaran, daboolay casaan cas-cas-casaan "cadho."
Dhadhanka jidhka waa mid aad u fiican, macaan iyo dhanaan. Sida laga soo xigtey qaabdhismeedka, waa mid wanaagsan, midabkiisu waa cagaar iftiin leh. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ascorbic acid ee miro ayaa sarreeya: kaliya 12.6 mg oo fitamiin ah 100 garaam oo miro ah.
Kala duwanaantan geed qummanin tayada u kala soocaan noocyo kale xilliga jiilaalka kale ee tufaaxa. Taajka waxaa lagu soo koobay tiro yar oo ah laamood qalfoof ah. Laga soo bilaabo jirridda laantu waxay u socotaa xagal ba'an, darajada waxoogaa waxay u jilceysaa dhulka.
Kala duwanaanshuhu waa mid sarreeya oo horey u soo galaya xilliga jilitaanka. Gaar ahaan, wax-soo-saarka ugu wanaagsan ee wanaagsan ayaa laga goyn karaa horraantii sannadka 5aad kaddib marka la beero, iyo xannaanooyinka, miraha waxay u muuqan karaan bilowga sanadka labaad. Geed geedeedka "Arday" adkaysi u ah qolof oo u adkaysta qaboobaha. Plus waa dhadhanka midhaha iyo muuqaalka badeecada. Tufaaxyada waxaa lagu kaydiyaa waqti aad u dheer, ku dhawaad ​​bartamaha May.
Ka mid ah cilladaha waxaa loo yaqaan kaliya oo Bisaylkiisa dambe ee miraha, kaas oo dhacaya kaliya bartamihii October.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo noocyada dayrta ee geedaha tufaaxa.
Noocyo Apple "Moscow ka dib"
Kala duwanaanta jiilaalka dabayaaqada ah ayaa loo arkaa mid aad u dhow, ugu caansan gobollada Bartamaha iyo gobollada Waqooyiga ee Ruushka. Waa natiijada noocyada taranta sida Cinnamon New iyo Northern Sinap kala duwan horay loogu sharxay.
Dajiyey miraha kala duwanaanshahan waa ku filan weyn, inkastoo aysan gaarin ugu badnaan. Qaabkoodu waa isku dhafan yahay, ribbing ma aha mid caadi ah. Maqaarku waa siman yahay, ma jirto xayndaab xitaa hareeraha. Waxaa jira dhibco subcutaneous ah, laakiin way adag tahay in la arki karo.
Marka bilawga ah ee bislaanshaha ka saaran midhaha midabkooda midabkooda ayaa noqda mid cagaaran-jaalle ah, oo leh "cadho" oo ah midabka jilicsan ee jilicsan dhinaca dhinaca qorraxda ee midhaha. Marka aad jiifto, miraha waxay noqdaan dahab dahabi ah.
Jidhku waa mid fiican oo la miiray, qaabab badan oo casiir leh. Midabkiisu waa caddaan. Macmacaanka dhadhanka waxay ku qiimeeyeen tasters sida wanaagsan, wuxuu leeyahay dhadhan macaan iyo dhanaan ah. 100 garaam oo miro ah ayaa ku jira 8.8 mg oo ah ascorbic acid.
Geedka ayaa mar kale xoog leh. Iyadoo leh taajajir ballaaran oo fara badan oo qaab-ballaaran leh. Si kastaba ha noqotee, kororka qiyaasta goosashada, taajku wuxuu noqonayaa mid ballaaran, oo ka kooban laan culus oo waaweyn. Nidaamka isdabajooga ah ee dhinacyada isweydaarsiga ayaa sii adkaynaya geeddi-socodka goosashada.
Miraha la soo qaaday dhamaadka bisha Sebtembar waxaa lagu kaydin karaa isbeddel aanna lumin iyada oo dhadhanka ilaa laga goosto goosashada cusub.
Cunista cunnida waxay isla markiiba noqon kartaa ka-saarista, sababtoo ah uma baahna inay jiifaan muddo dheer. Isla mar ahaantaana, khabiiradu waxay xusuusinayaan tayada macaamiisha saraysa ee tufaaxa kala duwan ee "Moscow ka dib" iyo tan iska caabinta cudurada fungal iyo dhaxan xilliga qaboobaha. Isdhexgalka sare ee noocyada kala duwan ayaa sidoo kale lagu xusay aagagga gobolada kala duwan.
Kala duwanaanshuhu waa mid aad u liitay xagga kor ku xusan qaabka qulqulka, taniyo markii ugu horeysay ee laga soo goosto geedaheeda waxaa la qaadan karaa oo kaliya 6-7 sano kadib markii la beero. Ka sokow taajkii geedku aad buu u badan yahay, waxay u baahan tahay khafiifinta joogtada ah, waxay xoojisaa habka soo go'idda.
Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato daryeelka caafimaad ee noocyada dambe ee geedaha tufaaxa?
Sameynta habboon ee taajka tufaax ah
Doorashada ugu wanaagsan ee taajka ah ee geedka tufaaxa waa qaab la isugeeyey oo leh faafin laamaha ku wareegsan jiriga.
Gooyo u baahan tahay laga bilaabo sanadka koowaad seedling iyo xataa ka hor inta beerto. Waxaa muhiim ah in seedling uu leeyahay seddex heer oo ah laamood, mid kasta oo aan dooranno kan ugu xoogga badan uguna toosna qaab muuqaal ah oo ka gooyey dhamaan kuwa kale ee hor istaaga koritaanka.
Waxyaabaha ugu muhiimsani waa in kormeeraha ugu wayn uusan laheyn tartamayaal, sababtoo ah haddii geedku uu ka koro laba kiciyayaal, waxay u jabi kartaa laba qaybood sababtoo ah culeyska dalagyada. Sannadka kowaad waxaa habboon in la gooyo qiyaastii 40 sentimitir oo laamood ah, sanadaha soo socda 20 sano.
On geedaha fruiting, waa muhiim in la gooyaa dhammaan laamaha qalalan, burburay iyo waxyeelo, si aysan u keenin lulmayo geedka oo dhan iyo ma sababi faafitaanka cudurka ama cayayaanka. Sidaa darteed, nabarrada dhirta ayaa muhiim ah in lagu daaweeyo xalal gaar ah waana inaad hubisaa in aad xoqdo jilifka.
Waxaan bacriminnaa geedaha tufaaxa dabayaaqadii
On carrada bacrin ah Dhirta tufaaxa ficil ahaan uma baahna bacriminta. Waayo, waxay noqonaysaa mid waqti ku filan oo bacarimis ah qaabka humus iyo isku dar ah walxaha raadraaca ee kicin kara koritaanka iyo miro khudaarta (nitrogen, fosfooraska, boron iyo nitrate).
Tan iyo geed weyn oo si sahlan loo dhaawici karo by dhaxan, si looga ilaaliyo qabow iyo caawiyo dib u cusbooneysiin, waxaa muhiim ah in lagu dar xal 0.5% HOL si ciidda. Qeyb ka mid ah ayaa la keenaa 2 toddobaad ka dib markaad ubaxayso geedka tufaaxa, iyo kan labaad ee asbuucii, isla mar ahaantaana la socda chloride potassium.
Haddii laguu gooyey kaydinta muddada dheer ee dalagga, waa muhiim bacrimiya geedo tufaax leh cusbada calcium. Samee mineralliyadan waxay u baahan yihiin inay si joogto ah xilliga xagaaga ubaahan yihiin. Isla mar ahaantaana, xoogga saarista cusbada kalsiyum waa in ay si joogto ah uga korodhaa 0.5% xal 0.3% oo leh quudin kasta. Ereyga u dhexeeya bacrimin waa inuu ahaado qiyaastii 2 toddobaad.
Miyaan biyo ka cabbayaa?
Dhirta dhirta ayaa si gaar ah u jecel biyaha. Carrabta ay ku beeranayaan waa inay lahaadaan dheecaan wanaagsan, haddii kale geedku way qudhmi karaan. Waraabinta waa inay ahaataa geedo keliya. si toos ah ka dib markaad degto. Mid ka mid ah seedling oo ku saabsan 30 litir oo biyo ah.
Sanadaha qallalan, tufaaxa ayaa lagu taliyaa waraabinta joogtada ah. Isla mar ahaantaana, biyaha ayaa lagu shubay godad qoyan oo ku yaal agagaarka ama iyadoo la adeegsanayo nidaamka waraabka.
Daryeelidda geedka jiilaalka
Daryeelka sidoo kale waxaa ka mid ah ilaalinta. Noocyada xilliga qaboobaha iyo xilliga jiilaalka guud ahaan waxay u adkaystaan ​​dhaxan. Si kastaba ha noqotee, feejignaan dheeraad ah ma yeelo. Gaar ahaan, waa mid aad u muhiim ah in la daboolo wareegga xeegada u dhow oo leh lakab qaro oo ah humus iyo peat si looga hortago ciidda lagu keydiyo.
Jilifka geedka tufaaxa waa raaxo loogu talagalay jiirka iyo kala duwanaanshaha, kuwaas oo ay si gaar ah uula qabsadaan wakhtiyada qaboobaha waqtiga. Si aad geedka uga ilaaliso geedka obyazniki lapnikommararka qaarkood lagu duuduubo daroogada.
Beerto geedo tufaaxa dambe ah ee beerta
Ku saabsan waqtiga soo degitaanka
Sida geedo kale oo geedo tufaax ah, noocyo goor dambe ayaa la beeran karaa xilliga dayrta iyo xilliga qaboobaha. Waxa kaliya ee muhiimka ah waa in dayrta ay suurtogal tahay in la beero geed xitaa ka dib barafka ayaa dhacay, waxa ugu muhiimsan waa in dhulka aan weli la qaboojin.
Geedka fidinta ka hor laba toddobaad ka hor inta aanuu barafku dhalin karin koritaankiisa, halka xilliga qaboobaha ay tahay inuu sii joogo. Guga, geedaha tufaaxa waxaa la beeray dhowr maalmood ka dib boodboodka boodhka.
Waxaan dooran karnaa xulashada ciidda ugu fiican
Dhirta Apple ma degi karto ama ficil ahaan ma midho dhalinayso haddii aad ku beeri kariska carrada ah ama dhoobo. Haddii aadan haysan doorasho, markaa marka ugu horeysa ee carrada waa la demin by amooniyam, iyo tan labaadna waxaa lagu qasan yahay Bacriminta iyo ciid webiga.
Xulashada ugu wanaagsani waa carrada loamy leh drainage fiican (dheecaan ayaa sidoo kale la samayn karaa si madaxbannaan, qodaya qulqulo u dhow ama god oo biyo badani ay soo ururinayaan).
Tijaabooyin muhiim ah oo laga beerto geedka dambe ee tufaaxa
Ceelka for seedling waa qodayaa 2-4 toddobaad ka hor beerto degdeg ah. Mugdigu waa inuu noqdaa laba jeer oo ah cabbirka nidaamka xididka ee seedling. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in hoose ee ceelka waxaa lagama maarmaan ah in lagu shubo isku dar ah ee topoil leh Bacriminta ee foomka tuulada, oo kaliya ka dibna geed geed. Ciidda ka dib markii la beero ayaa is dulfuulaya oo la waraabiyey.
Marka laga beerto waxaa muhiim ah in aan qodin dhulka oo qoorta xididka ee seedling ah. Waa in laga tagaa 3-4 sentimitir oo kor ku xusan heerka dhulka. Ka dib oo dhan, wakhti ka dib carrada ayaa si deg deg ah u degi doona, oo dhidibku hoos ayuu hoos ugu dhici doonaa. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku beeri seedling aad u sareeya, xididdadiisa waxay noqon doontaa dusha sare iyo geedka lama aqbalo.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo tufaax ah 2019